Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ekpeziela - BBC News Ìgbò
Nkenke aha onyonyo Raila Odinga (R) ekweghịbu nabata Uhuru Kenyatta (L) dịka onyeisiala mba Kenya
Onyeisiala mba Kenya bụ Uhuru Kenyatta na onye ndu otu pati na-ekwenyeghị n'ọchịchị ya bụ Raila Odinga ekwela nkwa ijikọakaọnụ kpaa udo maka ọdịmma mba ahụ.
Nke a na-estote ọgbahara sochiri ntuliaka e mere na mba ahụ n'afọ 2017.
Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kpọrọ onwe ha 'nwanne' na mgbasaozi na onyonyo televishọn ha gbakọrọ aka mee ụnyaahụ.
Ọkwa ha mara mere ka odeakwụkwọ mba Amerịka bụ Rex Tillerson gasịrị Kenya.
Odinga duburu onwe ya iyi ọrụ dịka "onyeisiala ndị ọha" ma jụ ịnabata Kenyatta dịka onyeisiala ya
N'okwu ya na Nairobi, Tillerson toro ụmụnwoke abụọ ahụ maka "itupu ezi ụkwụ".
Mana , o kwuru na mba Kenya kwesịrị "imegharị ụfọdụ ihe dịka imechị ụlọ mgbasaozi televshọn na itinye aka n'ihe ụlọikpe na-eme".
Na mbụ Kenyatta na Odinga ekwetaghị oku ndị Kenya na ndị na anọchịta anya mba ọzọ kpọrọ ha ka ha kpee udo.
Ihe dịka mmadụ otu nari na ise ka e gburu na ntuliaka e mere nke Kenyatta meriri ka pati na-agba ya mgba jụchara isonye mee.
N mgbasaozi ahụ ha nke abụọ jikọrọ aka mee, Kenyatta kwuru: "Anyị ga-ebido usoro ịkpa ihe na-esogbu anyị na ihe na-ebute nkewa n'etiti anyị."
Odinga si :" Oge idozi ihe na-esere anyị eruola".
Chioma Akpotha: Ihe nkiri m na-eme bụ akara aka m
Na nkọwa ya, onye ntaakụkọ BBC na Nairobi bụ Ferdinand Omondi kwuru na ụmụnwoke abụọ ahụ ikpezi ihe na-esere ha agaghị adị mfe n'ihi na esemokwu ndọrọndọ ọchịchị ahụ dapụtara kewara mba Kenya na agbụrụ na agbụrụ.
Ha ekwuteghị maka ebubo pati na-anọghị n'ọchịchị na-ebo na e nwere wuruwuru, tigbuozọgbuo ndị uweojii na aka ike nke gọọmentị nọ n'ọchịchị na ntuliaka ahụ kama ha kpọrọ oku mkparịta ụka udo nke mba ha.
Tupu Tillerson aga Kenya, ọ katọrọ gọọmentị nke mba Ethiopia maka iwezụga iwu ala n'ụsọ nke a kpọrọ 'state of emergency' na bekee n'ihi ọgbaghara dị na mba ahụ. Nke a mere ụfọdụ ji ahụta nzukọ mberede Kenyatta na Odinga mere dịka ihe mmekasị ndị mmadụ anya, ebe ụfọdụ nabatara ya sị na ọ bụ ihe ha kwesịrị ime kemgbe.
Ka ọ si dị, Kenya na-abanye ihe nkiri ndọrọndọrọ ọchịchị agba nke abụọ ma mba ụwa na-ekiri.
Cheta na e duru Kenyatta iyi ọrụ nke agba nke abụọ n'ọnwa Nọvemba afọ gara aga ka ọ merịrịchara na ntụliaka mmegharị nke Odinga jụrụ isonye.
Kenya meburu ntuliaka n'ọnwa Ọgọstụ nke ụlọikpe nyere iwu ka emegharịa n'ihi ebubo nrụrụaka jupụtara na ya.
Hailemariam Desalegn: 'nke a bụ mbido mgbanwe' - Balcha
Raila Odinga echiela onwe ya onyeisi na Kenya
Mba US, EU akatọla idu iyi ọrụ Odinga dụrụ onwe ya
#NextLevel: Nkwa ọhụrụ iri Buhari kwere
Ihe anọ na-ejikọta ndị Naịjirịa
Ihe ise i kwesịrị ịma maka Alvan Ikoku